घरपरिवार Archives - Page5of5-::DainikPatra
दैनिक पत्रका सबै घरपरिवार
स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्दै, १ हजार ६ सय ५५ जनाले गरे बीमा
बागलुङ । जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बिमितले उपचार लिन सुरु गरेका छन् । बागलुङमा उपचार सेवा लिने पहिलो बिमित सदस्यमा भिमकुमारी पाध्य हुन् । गत असार मसान्तभित्र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा दर्ता भएका...
गृह निर्माणमा वास्तु विज्ञान: घरभित्रको डिजाइन यस्तो बनाउनुस्
गृह निर्माण होस् वा अन्य कुनै निर्माण कार्य, वास्तुको प्रभाव प्रत्येक निर्माण कार्य, स्थान एवं वातावरणमा पर्छ । यो कुराको वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित भएर त्यसको अवलम्बन विश्वका विभिन्न स्थानमा भैरहेको छ । वास्तुशास्त्रका प्राकृतिक...
के तपाईं शाकाहारी हो ? यस्ता छन् शाकाहारी बन्नुका १५ फाइदा
शाकाहारी भोजनमा प्रोटिन, भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेटजस्ता तत्व पाइन्छन्, जो स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छन् । यस्तै, फाइबर, क्यालोरी, भिटामिन पाइन्छन्, जसले विभिन्न रोगबाट मानिसलाई बचाउँछ । ...
पुरुषको सेन्स अफ ह्युमर मन पराउँछन् महिलाहरू
महिलाहरूलाई पुरुषको ड्यासिङ पर्सनालिटी, उनीहरूको रफ एन्ड टफ लुकले केही समय आकर्षित गर्नसक्छ तर पुरुषको सेन्स अफ ह्युमरले महिलाहरूको मनमा जीवनभर छाप छोड्छ, तसर्थ महिलाहरू सेन्स अफ ह्युमर भएका पुरुषलाई मन पराउँछन् । महिलाहरू...
बालबालिकाका लागि कुन स्तरको पोषण आवश्यक पर्छ, जान्नुस्
आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् । त्यसैले बालबालिकाको उचित स्याहार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि खाने बानी परिवर्तन गर्दैमा बालबालिकाको उचित विकास हुँदैन । उनीहरूले खाने खाना पोषणतत्वयुक्त हुनुपर्छ । यसो भए मात्र...
यसरी बनाउनुस् काजु चिकेन करी
पहिले कुखुराको मासुलाई छाला निकालेर टुक्रा गरी साइडमा राख्ने । सबै मसलालाई फ्राई प्यानमा हल्का तताएर सेलाएपछि पिस्ने । काजु पनि पिस्ने । त्यसपछि फ्राई प्यानमा तेल तताउने, लसुन, अदुवा र प्याज भुट्ने अनि...
ख्याल गर्नुस्, यस्तो गर्दा छालाको सुन्दरता बिग्रिन्छ
तातो पानीले धेरै बेर नुहायो भने छालामा हुने फ्याट्टी एसिड, सेरामाइड्सजस्ता तत्व नष्ट हुन्छ र यसले छालालाई रुखो, सुख्खा र फुस्रो बनाउँछ । त्यसैले तातो पानीले १० अथवा १५ मिनेटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन । ...
घुर्ने बानी छ भने सचेत हुनुहोस्
तपाईं असाध्य घुरुवा त होइन ? हो भने होस गर्नुहोस् है । तपाईं जतिबेला पनि यमदूतको काखमा पुग्न सक्नुहुन्छ । निकै घुर्ने मानिसको आयु छोटिन सक्ने वैज्ञानिकहरुले जनाएका छन् । अत्यधिक घुर्ने मानिसमा मुटु...
स्वस्थ रहन यस्तो खाना राम्रो : तरकारी र फलफुलबाट के फाइदा ?
एउटा उखान छ– ‘हामी दाँतले आफ्नै चिहान खनिरहेका हुन्छौं ।’ यसको सार हामीले खाने खानाले स्वास्थ्यमा गर्ने असर र प्रभाव नै हो । तसर्थ खाना खाँदा जिब्रोकोे स्वादका लागि होइन, शरीरको स्वास्थ्यका लागि...
चुरोटको तलतल हटाउन र निकोटिनको असर कम गर्न के खाने ?
एजेन्सी – चुरोटमा पाईने निकोटिन सबैभन्दा बढी कूलत रसायन हो, जसका कारण चुरोट छोड्न गाह्रो पर्छ । चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थबाट उत्पन्न हुने निकोटिनले मांशपेशी र स्नायु कोष बृद्धि हुनबाट रोक्नुको साथै स्मरण...
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पहिलो निर्णय : विशेषज्ञ समिति गठन
काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पहिलो निर्णय युवा सरोकारको विषयमा गरेका छन् । लाखौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उनीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट गलत...
‘स्वस्थ शिशु’ प्रतिस्पर्धामा आमा र शिशु
अन्जली रम्तेल काठमाडौँ, २६ साउन । स्वस्थ शिशुको जाँच गर्ने क्रममा रोएका बच्चालाई खेलौना र चकलेट दिँदै फकाउँदै हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा मधु तुम्बाहाम्फे । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने...